Tigey oo beeniyey war laga faafshay
8 Feb 8, 2013 - 2:01:50 AM
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa wax laga xumaado iyo xad gudub ku tilmaamay Sawir mid ka mida Baraha Internetka lagu faafiyey.
Sawir sanadkii hore ahaa xili Roobab ay ka da'een magaalada Galkacayo ayuu sheegey gudoomiyuhu xili uu askari ka caawiyey Badeel inay u dhigeen Warbaahinta mid xafiiska Horseed xoog looga furey magaalda Galkacayo.
''Horseed Media waxa uu ku xad gudbey anshaxa Saxaafada,tan Masuliyiinta dowladda iyo mida Islaamka ,hadii Farole ay mucaaradayaan maahan in la burburiyo dhaqankii Somalida iyo tan Diinteena'' Ayuu yiri Tigey.
Dadweynuha waxa uu sheegey in tirooyin badan isku soo hor dhoobeen Xafiiska Horseed ee magaalada Galkacayo iyagoona dalbanaya in la diiwaangeliyo.
''Waan la xisaabtamaynaa Horseed uga hari mayno ,meeshan qori ka qaatey anigu maahi Hogaamiye kooxeed waxaan ahay masuul dowladeed'' ayuu raacshay.
Warbaahinta qaar ayaa waaydan danbe ku hawlaneyd kicinta dadweynaha iyo weliba masuuliyiinta dowladda oo laga been abuurto ,waxana ay noqdeen kuwo ku hungoobey kadib markii uu hirgaley nidaamka Axsaabta badan ee Puntland habkii Qabiilka uga gudubtey.